MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward Super Double Data Packages faq MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Super Double Data Packages
Super Double Data Package ဆိုတာ ဘာလဲ?
Super Double Data Package ဆိုတာကတော့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဘယ် package ဝယ်ဝယ် ဒေတာ နှစ်ဆ (100% Bonus) ရရှိ နိုင်မယ့် ပက်ကေ့ချ် များ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အင်တာနက်သုံးစွဲမှုတိုင်းအတွက် ပိုမိုစျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် အသုံးပြု နိုင်သလို ဝယ်ယူတိုင်းမှာ လည်း မူလပက်ကေ့ချ်ဒေတာနှင့် သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Super Bonus Data (MB)
Super Bonus Data Validity
၉၉၈ ကျပ် ၁၀၀၀ MB ၃၀ရက် (သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ၇ရက်အတွင်း (ဒေတာသယ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်) ၁၀၀၀ MB ၇ရက်
(၇ရက်အတွင်း ထပ်မံဝယ်ယူပါက Bonus ဒေတာ အချင်းချင်း ပေါင်းစည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။)
၁၉၉၈ ကျပ် ၁၉၉၈ MB
၄၉၉၈ ကျပ် ၄၉၉၈ MB
၉၉၉၈ ကျပ် ၉၉၉၈ MB
Super Double Data Pack ကို ဘယ်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
MPT မှ ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကား အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA prepaid and postpaid အသုံးပြုသူများနှင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသူများ အားလုံး ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ CDMA, Base Tariff နှင့် လက်ရှိအသုံးပြုခြင်းမရှိသူများ ဝယ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Base Tariff အသုံးပြုသူများသည် ဆွေသဟာ/ရှယ်ပြော/ရွှေစကား အစီအစဥ်များကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုပြီး Super Double Data Package ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
(က) Base Tariff အသုံးပြုသူများသည် Swe Thahar ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန် *234*2# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
(ခ)Base Tariff အသုံးပြုသူများသည် Shal Pyaw ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန် *234*3# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
(ဂ) Base Tariff အသုံးပြုသူများသည် Shwe Zagar ကို ပြောင်းလဲအသုံးပြုရန် *234*4# ကိုခေါ်ဆိုပါ။
*224# ကို ခေါ်ဆိုပြီး (သို့) MPT4U မှတဆင့် ပက်ကေ့ချ်၏ မူလဒေတာ နှင့် Super Bonus Data လက်ကျန်ပမာဏ နှင့် သက်တမ်း ကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Super Double Data ကိုဘာတွေသုံးလို့ရမှာလဲ?
Super Double Data ကို Facebook (social media), Youtube (streaming), Games များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် ကန့်သတ်ချက်မရှိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Super Double Data Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
အကြိမ်အရေအတွက်အကန့်အသတ်မရှိ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ပက်ကေ့ချ် ၏ မူလဒေတာ ပမာဏကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင် ဒေတာသယ်ဆောင်ခွင့် ကာလအတွင်း ပက်ကေ့ချ်အသစ်ထပ်မံဝယ်ယူပါက နောက်ဆုံးဝယ်ယူသော ပက်ကေ့ချ်၏သက်တမ်းအထိ အသုံးပြုနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။
Super Bonus Data အချင်းချင်း၏ သက်တမ်းနှင့် ဒေတာလက်ကျန်ကို ယင်း၏ သက်တမ်း ကာလ (၇) ရက် အတွင်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Super Bonus Data နှင့် မူလဒေတာကိုပေါင်းစည်းအသုံးမပြုနိုင်ပါ။
Customer Journey and bonus data acquisition state
Super Double Data Pack ရဲ့ သက်တမ်းက ဘယ်လောက်လဲ?
Super Double Data Pack များ တွင် မူလဒေတာနှင့် Super Bonus Data ဆိုပြီး ဒေတာပမာဏ ပုံစံ (၂) မျိုးပါ၀င်ပါသည်။ Package၏ မူလဒေတာ သက်တမ်းက (၃၀)ရက်ဖြစ်ပြီး ဒေတာသယ်ယူနိုင်သောကာလမှာ(၇)ရက် ဖြစ်ပါတယ်။
Super Bonus Data သက်တမ်းမှာ (၇)ရက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေတာသယ်ဆောင်နေသော ကာလ (Package ၏ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီး (၇) ရက်)အတွင်းမှာ ကျန်ရှိနေသော ပက်ကေ့ချ်ဒေတာများကို အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကာလအတွင်း Package အသစ်တစ်ခုဝယ်ပါက ယခင်အသုံးပြုရန်ကျန်ရှိနေသော ပက်ကေ့ချ်ဒေတာပမာဏ ကို ပေါင်းစည်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Super Bonus Data အချင်းချင်း၏ သက်တမ်းနှင့် ဒေတာလက်ကျန်ကို ယင်း၏ သက်တမ်း ကာလ (၇) ရက် အတွင်း ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Super Double Data Pack ကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလို့ ရပါသလား?
ရပါတယ်။ Super Double Data Pack များကို တခြားသူများသို့ လက်ဆောင်ပေးလိုပါက *106*2# (သို့) *888# မှတစ်ဆင့် အမှတ်စဉ် “2. Gift (သို့) 2. လက်ဆောင်ပေးမည်” ကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးမည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Super Double Data Package များကို ဝယ်ယူပြီး ထိပေါက်အစီအစဥ်တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပါသလား?
စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှာ ၉၉၈ကျပ်ဖြင့် Super Double Data (905MB+ 905MB) ပက်ကေ့ချ် ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့မှာ MPT4U App ၏ Order History တွင် “Super Double Data 1000MB”လို့ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ Super Double Data (1000MB+1000MB) အတိုင်း သုံးစွဲခွင့် ရမှာ လား?
စက်တင်ဘာလ ၄ရက်နေ့မှစပြီး ၉၉၈ကျပ်ဖြင့် Super Double Data 1000MB(30 days)+1000MB
(7 days) ကို ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားပါသည်။
ပက်ကေ့ချ်၏ offer name အဖြစ် MPT4U တွင် “Super Double Data 1000MB” သို့ ပြောင်းလဲထား ပါသည်။ စက်တင်ဘာ ၄ရက်နေ့မှ စတင် ဝယ်ယူထားသူတိုင်း ၉၉၈ကျပ်ဖြင့် 1000MB(30 days)+1000 MB (7 days) ကိုခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့အထိ သုံးစွဲဝယ်ယူထားသူများ သည် ခံစားခွင့်အသစ်ကို အကျုံးမဝင်ပါ။
ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားသော ပက်ကေ့ချ် ကို ၂၀၂၀ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၄)ရက်နေ့ မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အချိန်အထိ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ အခြား Super Double Data Packages များ ၏ Promotion ကာလမှာ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၄) ရက်နေ့မှ MPT မှ ထပ်မံမကြေညာခင်အချိန်အထိဖြစ်ပါသည်။